DEG-DEG: Pep Guardiola Oo Si Buuxda U Xaqiijiyay Warkii Dunidu Sugaysay & Haddii Uu Kevin De Bruyne Kulanka Arsenal Ciyaarayo - Gool24.Net
DEG-DEG: Pep Guardiola Oo Si Buuxda U Xaqiijiyay Warkii Dunidu Sugaysay & Haddii Uu Kevin De Bruyne Kulanka Arsenal Ciyaarayo
Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa war cad kasoo saaray taam ahaanshaha khadka dhexe ee kooxdiisa ee Kevin De Bruyne iyo haddiiba uu diyaar u yahay kulanka muhiimka ah ee ay habeen dambe soo dhawayn doonaan dhigooda Arsenal.
Guardiola ayaa shaaca ka qaaday warkii dunida oo dhani sugaysay waxaana uu si buuxda u shaaciyay in De Bruyne uu gabi ahaanba seegi doono kulanka Etihad kaas oo war weyn u ah Arsenal iyo Mikel Arteta.
Pep ayaa sheegay in dhaawaca KDB uusan halis badan ahayn balse uu ka maqnaan doono kooxda kulamada soo socda.
“Uma malaynayo (Inuu halis yahay dhaawacu), laakiin kulamada soo socda waxaan filayaa inuu maqnaan doono, waynu arki doonaa, anigu ma garanayo (Inta uu dhaawaca ku maqnaan doono), kama jawaabi karo sababtoo ah ma garanayo” ayuu yidhi Guardiola oo ka hadlaya xaalada dhaawaca Kevin De Bruyne.
Haddiiba xaaladu ku xuntahay dhinaca De Bruyne oo wadnaha kooxdooda ah, warka kale ee u wanaagsan Sky Blues ayaa ah inuu diyaar yahay weeraryahan Sergio Aguero oo uu ciyaarta habeen dambe qayb ka qaadan karo.
Guardiola oo xaalada Aguero ka hadlaya ayaa yidhi “Koox kastaa way u baahantahay weeraryahanadeeda, waxaanu soo ciyaarnay iyaga la’aantood, Sergio si wanaagsan ayuu u tababaranayaa waanan ku faraxsanahay inaan isaga ku arko garoonka kaddib wakhti sidaas u dheer”